Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.3.2.7 mora
Orinasa fiantohana ara-pahasalamana no antsipirihany vaovao momba ny fitsaboana nandray araka ny mpanjifa. Izany fanazavana azo ampiasaina amin'ny fikarohana manan-danja momba ny fahasalamana, fa raha lasa bahoaka mety mety hitarika ho amin'ny fihetseham-po ratsy (ohatra, menatra) sy ny ara-toekarena ratsy (ohatra, very ny asa). Lavitra miavaka, angon-drakitra lehibe maro loharanom-baovao manana izay mora. Ny maha saro-pady ny vaovao ity dia ampahany amin'ny antony izay loharanom-baovao lehibe angon-drakitra Matetika no afaka nidirana (voalaza etsy ambony).
Ny fomba iray izay mpikaroka miezaka ny hiatrika toe-javatra ity dia ny de-hamantatra datasets izay manana vaovao saro-pady. Saingy, araka ny hasehoko amin'ny an-tsipiriany ao amin'ny Toko faha 6 (Mifehy) izany fomba voafetra ho zava-dehibe amin'ny fomba izay tsy be ankasitrahan'ny na ara-tsosialy sy ny angon-drakitra mpahay siansa ny mpahay siansa.
Ho famaranana, ny angon-drakitra lehibe loharanom-anio (sy rahampitso) amin'ny ankapobeny, folo monja no toetra. Maro ny ny tsara fananana-lehibe, foana-on, ary nonreactive-tonga avy any ny zava-misy ao amin'ny orinasa taona nomerika sy ny fitondram-panjakana dia afaka hanangona antontan-kevitra amin'ny ambaratonga izay tsy azo atao aloha. Ary, maro ny ratsy fananana-tsy feno, tsy afaka nidirana, tsy solontenan'ny, mikisaka, algorithmically very hevitra, tsy afaka nidirana, maloto, ary saro-pady-tonga avy any ny zava-misy fa ny tahirin-kevitra dia tsy nangonin'ny mpikaroka ny mpikaroka. Fahatakarana ireo toetra no dingana voalohany ilaina ny mianatra avy amin'ny tahirin-kevitra lehibe. Ary, ankehitriny mitodika ny fikarohana paikady azontsika ampiasaina amin'ny angon-drakitra izany.